३ प्रतिशतले बढेको बजारमा चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि - Aarthiknews
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढीरहेको छ । यो दिन साढे ३ घण्टाको कारोबार अवधिसम्म नेप्से परिसूचक ८२ दशमलव ८२ अंक बढेर २ हजार ४९८ दशमलव ८३ विन्दुमा पुगेको हो ।
यस अवधिसम्म चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड सहित चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि देखिएको छ । बिहीवार पनि सबैभन्दा बढी माग रहेको चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर रू. ६०५ पुगेको छ भने लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीको शेयरमूल्य पनि १० प्रतिशत बढेर रू. २८६ पुगेको छ ।
त्यस्तै सर्वाधिक रकमको कारोबार भैरहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमूल्य पनि यो दिन ९ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेर रू. ५५८ पुगेको छ । यी वाहेक किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य पनि ९ दशमलव २९ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य साढे ३ घण्टाको अवधिसम्म रू. १ हजार ५३० कायम भएको छ ।